Farshaxan-yar-yar oo Farshaxan ah: Dadka Dufan Lama oggola | Martech Zone
Waxaan ka mid ahay kuwa waaweyn ee 'Americans' ee aad ka akhriso tirakoobka. Maanta, inta udhaxeysa ka shaqeynta hawlo fara badan, waxaan u maleynayay inay noqon laheyd madadaalo in la sameeyo xoogaa doodling in Illustrator. Waxaan haystay fikrad yar oo majaajillo ah waxaanan aaday dhanka Microsoft Clipart si aan u arko haddii aan ka heli karo dufan dufan leh oo aan ku isticmaali karo booskayga.
Nope. Waxay umuuqataa in Microsoft ay siyaasad ahaan ku saxan tahay barnaamijkeeda isla markaana aysan jirin wax la yiraahdo qof buuran… ilaa aad tahay qof caato ah oo iska fiirinaya muraayadda carnival. Qofna ma weyna, qofna ma cayilan… laakiin waxaa jira maroodi culus. (Sidee ku ogaan kartaa marka maroodigu culeyskiisu culus yahay?)
Waa tan waxa ay leeyihiin:
Waan xanaaqay. Uma maleynayo inay cadaalad tahay in clipart uusan matalin dadka Mareykanka. Haddii ku dhowaad kalabar dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanku ay miisaan culus yihiin, markaa waxaan u maleynayaa in in ka badan kalabar dhammaan clipartyadu ay miisaan culus leeyihiin!
Qiyaastii 127 milyan oo qaangaar ah oo ku nool Mareykanka ayaa miisaankoodu aad u culus yahay, 60 milyan oo buurnaan ah, iyo 9 milyan oo aad u cayilan.
Heck, ragga bidaarta leh waxay leeyihiin 3 bog oo clipart ah halkaas! Aaway raggi buuran?! Dad buuran baa mideeya! Waxaan rabnaa clipart baruurta! La xiriir Microsoft maanta una sheeg inaanan si khaldan loogu soo bandhigi doonin clipart caato ah!
Ka dhig Bloggaaga
Nov 15, 2006 saacadu markay tahay 6:15 PM
OK Taasi waa QOSOL! Waad ku mahadsan tahay wadaagista! Siyaasad ahaan saxda ah (madaxa ciida) farshaxanka. Qaali
Laakiin maxaa yeelay dufankaagu macnaheedu maahan in adduunka intiisa kale ay waafaqaan. Tag dhinta soodhiyamka sare ama xoogaa sh **
Ma lihi cadaadis dhiig oo sareeya sidaa darteed uma maleynayo in soodhiyamku sameyn doono. Waxaan ahay musharax weyn oo sonkorow ah, in kastoo! 😉